နောက်ဆုံးထွက်ရှိလာသည့်သတင်းများအရ LG Nexus 2015 သည်ယူရို ၄၀၀ အောက်သာကျသင့်မည် Androidsis
Alexis Martinez | | ကို Nexus
အနာဂတ်ဂူးဂဲလ်ထုတ်ကုန်များနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ ဆက်၍ ။ ဒီတစ်ခါမှာတော့နောင်လာမယ့် LG Nexus 2015 အကြောင်းပြောသွားတာကလွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း Google ကတရား ၀ င်တင်ပို့ရောင်းချမယ် လာမည့်စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက် San Francisco မှာ။
ကောင်းပြီ၊ ဒီ terminal နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောလာဟလတွေဟာကွန်ယက်မှာလည်ပတ်နေတုန်းပဲ။ နောက်ဆုံးဖတ်ခဲ့တဲ့ LG terminal က Mountain View ကလူတွေနဲ့အတူစျေးနှုန်းချိုသာစွာပြန်ရမယ်ဆိုတာပါပဲ။
ဒီကိရိယာမှာယိုစိမ့်မှုများစွာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပြီးပြီ။ သူတို့ထဲကတချို့ဟာတကယ့်အစစ်အမှန်ဖြစ်နိုင်တယ်၊ သို့သော်မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူတရားဝင်အတည်ပြုချက်မရှိသလောက်ဆိုလျှင်အရာအားလုံးသည်ထင်မြင်ချက်သာဖြစ်ပြီးစမတ်ဖုန်းကိုအများပြည်သူထံပြသလိုက်သည်နှင့်ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။ တရားဝင်အမည်မရှိသည့်တိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ခြင်းယူခဲ့ပြီးနောက်လာမည့် LG Nexus ၂၀၁၅ သည် B သုံးလုံးပါသော terminal တစ်ခုထပ်မံဖြစ်လာလိမ့်မည်။ တော်တော်လေးစျေးပေါကောင်းတယ်။ အနည်းဆုံးဒါက terminal နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးကောလဟလကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင်ညွှန်ပြနေတဲ့ပုံပဲ။
တင်ဆက်မှုအတွက်ထင်မြင်ချက်ကိုတင်ပြရန် ၃ ပတ်ခန့်ကျန်ရှိပြီး၊ Terminal နှင့်ပတ်သက်သည့်ယိုစိမ့်မှုများနှင့်ကောလာဟလများကိုမြင်တွေ့ရသည်။ ဤ Nexus3သည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ Google သည် Nexus 2015 နှင့်ထပ်တူထပ်တူဇာတ်လမ်းကိုထပ်မံထပ်ခါတလဲလဲပြောချင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက်စွမ်းအားပြည့်။ စျေးနှုန်းချိုသာသောဖုန်းကိုတီထွင်ရန် LG ကို LG မှီခိုခဲ့သည်။ ယူရို ၄၀၀ အောက်.
သင်သိသည့်အတိုင်း၎င်း၏အတွင်းပိုင်းမှတ်ဥာဏ်ပေါ် မူတည်၍ terminal ၏ကွဲပြားခြားနားသောကွဲပြားမှုများရှိလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် Nexus 350 နှင့်အတူ၎င်း၏ခေတ်တွင်ကဲ့သို့စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်သည့်စက်ပစ္စည်းမှာယူရို ၃၅၀ ခန့်ရှိနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအသစ် Moto X ကိုသို့မဟုတ် OnePlus5အဖြစ်ဆိပ်ကမ်းကြောင့်ချွတ်ရွှေ့ကတည်းက, အပြိုင်အဆိုင်။ ဒီစျေးနှုန်းကိုမင်းဘယ်လိုထင်လဲ ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » ကို Nexus » နောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာသည့်သတင်းများအရ LG Nexus 2015 သည်ယူရို ၄၀၀ အောက်တွင်ရှိသည်
ကောင်းပြီ၊ ဒေါ်လာ ၄၀၀ တန်မိုဘိုင်းစျေးနှုန်းကဘာလဲဆိုတာငါမမြင်ဘူး။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ယူရို ၃၉၉ အတွက် ...